Kacdoonkii Mourinho: 5 meelood oo Man United durbadiiba iska badashay… (WARBIXIN) – Gool FM
Kacdoonkii Mourinho: 5 meelood oo Man United durbadiiba iska badashay… (WARBIXIN)
Byare August 30, 2016
(Manchester) 30 Agoosto 2016 – Saddex guul kaddib, Manchester United ayaa maraysa meel fiican oo uu ku hoggaaminaayo tababare Jose Mourinho.
Haddaba halkaan hoose waxaan idin kugu soo bandhigaynaa 5 qodob oo Man United ay ku wanaagsanaatay intii uu haayay tababare Jose Mourinho.
Mid ka mid ah dhaleeceynta ugu wayneed ee loo soo jeediyay Van Gaal waxay ahayd in kooxdiisa ay ka fadhisay dhanka weerarka.
Mourinho marnaba la guma aqoon kubbad weerar ah shaqsi ahaantiisa, balse Man United ayaaba hadda noqonaysa koox weerar intii uu haayay xilkeeda tababarnimo.
Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney iyo Marcus Rashford mid kasta wuxuu gool ku daah furtay ololahan hadda bilawga ah – Sidoo kale weerarka kooxda wuxuu sii hormari doonaa markii Henrikh Mkhitaryan uu helo fursad fiican oo ku soo bilaabasho ah.
Kalsooni soo laabatay:
Inkastoo Van Gaal uu soo saxiixday ciyaaryahanno qaali ah sida Angel di Maria iyo Radamel Falcao, hase yeeshee labadaba waxay noqdeen fashilmay, wayna ka tageen garoonka Old Trafford in ka yar hal sano.
Si kastaba ha ahaatee, saxiixyada uu sameeyay Jose Mourinho ayaa si dhaqso ah ula qabsaday qaab ciyaareedka kooxda.
Ibrahimovic wuxuu dhaliyey 4 gool kulamada oo dhan, halka Pogba uu u muuqdo mid aad ugu xoogan khadka dhexe ee kooxda sidoo kalana Henrikh Mkhitaryan ayaa muujiyay waxa uu yahay.
Van Gaal badana wuxuu ciyaaryahannada ka dheelsiin jiray boos qaldan, haba ahaatee Marouane Fellaini oo weerar ahaan u dheela ama Rooney oo khadka dhexe ka dheela.
Haddana layaab maba ka jiro in la arko Man United oo ku guuleysanaysa in qofkasta uu ka dheelo booskiisa waliba si raaxo leh.
Rooney waxaa aad ugu fudud inuu ka dheelo booska No. 10, waaba tii uu ku caawiyay Rashford kulankii ay 1-0 uga badiyeen kooxda Hull City Sabtidii, halka Marouane Fellaini uu u muuqdo mid dib loo dhalay markuu ka dheelayo booska khadka dhexe ee dambe.
Sida laga soo xiganayo ilo farabadan, ciyaaryahannada Man United waxay ku raaxeysanayaan tababarka Mourinho ee xerada tababarada kooxda.
Ciyaaryahannada ayaa aad ugu faraxsan tababaraha cusub aadna uga duwan sidii ay dareemi jireen xilligii Van Gaal, taasina waa mid ka mid ah sababaha ay Man United ay u noqoneyso mid ifeysa waayeheedaan cusub ee Old Traffod.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay, United waxay ahayd inay sugto ilaa xilliga ugu dambeeya si ay u sameyso saxiixa ay u baahnayd.
Wuxuu ahaa Fellaini xilligii David Moyes saddex sano ka hor, halka Van Gaal uu soo xareeyay Falcao iyo Anthony Martial maalintii u dambeysay suuqa kala iibsiga sanadihii 2014 iyo 2015.
Mourinho ayaa u muuqda inuu saxiixyadiisa ku sameynayo si ka horeysa xilliga uu xirmaayo suuqa taas oo micneheedu yahay in kooxdu ay leedahay xasilooni xilli ciyaareedkaan, waana shay ka maqnaa Man United ilaa xilligii Sir Alex Ferguson.
WARBIXIN: Xogtaan ayaa tibaaxeysa in Man United gardarro loo eedeyn jiray oo ay Liverpool tahay kooxda in lagu camirto mudan!... (Haddaba sidee?) + SAWIRRO
PSG oo doonaysa weerar yahanka Real Madrid ee Karim Benzema